China Lightweight Fireclay Brick abakhiqizi nabaphakeli |Amandla
Isitini se-Fireclay Esilula
Izitini ze-fireclay ezilula zenziwe ngamaqoqo asezingeni eliphezulu angasindi futhi aqukethe inani elikhulu lama-micropores.I-high, low bulk density, conductivity encane ye-thermal, ukonga okuhle kwamandla kanye nomphumela wokushisa oshisayo, ikhwalithi ephezulu kanye nenani eliphansi.
Isitini se-fireclay esingasindi sinezici zokungaguquki, okungewona ubuthi nokunganuki, ukwakhiwa okuphephile nokulula.Kuyimpahla ekahle yokufakwa odongeni, ukufakwa kokushisa nokushisa;ayikwazi nje ukwandisa izinga lokushisa, ukunciphisa isikhathi sokushisa, kodwa futhi kunciphise ukusetshenziswa kukaphethiloli.Futhi inomsindo omuhle wokwahlukanisa nomsindo wokumunca, okuyisinqumo esingcono kakhulu sokonga amandla kanye nezisetshenziswa zokuvikela imvelo.
1. Isisindo esilula: umthamo omile wezitini ezingasindi yi-500-700Kg/m*3 kuphela, okuyi-1/4 yaleyo kakhonkolo ojwayelekile.
, 1/3 yobumba, 1/2 yebhulokhi engenalutho, ngenxa yokuthi ukuminyana kwayo ngobuningi kuncane kunamanzi, okuvame ukwaziwa ngokuthi ukhonkolo ofakwe umoya ontantayo phezu kwamanzi, ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo ekwakheni kunganciphisa ukuzithiba isakhiwo futhi unciphise kakhulu isisindo sesakhiwo.izindleko eziphelele.
2. Ukugcinwa kokushisa nokushisa ukushisa: Phakathi nenqubo yokukhiqiza ukhonkolo one-aerated, ama-pores amancane akhiwa ngaphakathi, futhi lezi zimbotshana zakha ungqimba lomoya ezintweni, okuthuthukisa kakhulu umphumela wokugcinwa kokushisa nokushisa ukushisa, ukuze ukuhanjiswa kwe-thermal conductivity. ukhonkolo ofakwe umoya ungu-0.11- 0.16W/MK.Umphumela wokushisa oshisayo uphindwe izikhathi ezingu-5 kunezitini zobumba kanye nezikhathi ezingu-10 zekhonkrithi evamile.
3. Ukumuncwa komsindo kanye nokuvala umsindo: Isakhiwo esinezimbotshana sikakhonkolo ofakwe emoyeni siyenza ibe nokumunca kahle komsindo nokusebenza kokufakwa komsindo, okungakwakhela isikhala esiphezulu sasendlini esingangenwa umoya.Ukuhlinzeka ngendawo yokuhlala enokuthula nenethezekile.
4. Inani elincane lokushwabana: ngenxa yokusetshenziswa kwesihlabathi somfula esisezingeni eliphezulu namalahle agayiwe njengezinto ze-siliceous, inani le-shrinkage lingu-0.1--0.5mm/m kuphela, futhi inani elincane lokushwabana lezinto ezisezingeni eliphezulu liqinisekisa ukuthi udonga lwakho ngeke kuqhekeke.
5. Ukungangenisi: Isakhiwo sembotshana yalo mkhiqizo siwenza ube buthakathaka ekusebenzeni kwe-capillary, futhi umunca amanzi kancane futhi uhambisa umswakama kancane.Isikhathi esidingekayo ukuze umthamo ofanayo wamanzi amunce amanzi ukuze agcwale izikhathi ezi-5 kunezitini zobumba.
6. Ukuvikelwa kwemvelo: Inqubo yokukhiqiza, yokuthutha kanye nokusetshenziswa akungcolisi, yonga ugesi futhi iyanciphisa ukusetshenziswa, futhi kuyizinto zokwakha eziluhlaza futhi ezivumelana nemvelo.
7. Ukumelana nokuzamazama komhlaba: Isakhiwo esifanayo sisebenzisa izitini ezingasindi ukuze kuthuthukiswe izinga lokumelana nokuzamazama komhlaba kunezitini zobumba.
8. Ukuqina: Amandla esikhathi eside kakhonkolo ofakwe emoyeni azinzile.Ngemva konyaka owodwa wokuchayeka emkhathini wesifanekiso, amandla akhule ngo-25%, futhi ahlala azinzile ngemva kweminyaka eyishumi.
9. Ukucutshungulwa: isisindo esilula, osayizi abahlukahlukene, kulula ukubethela, ukubhoboza, ukusika, isaha, ukuhlela nokubeka amapayipi, futhi usebenzise amapayipi okunweba odongeni, angalungisa ngokuqondile amakhabethe alengayo, ama-air conditioner, ama-hoods, njll., wena Ukufakwa kwamanzi nogesi, ukuhlobisa ikhaya kuletha lula.
10. I-Refractory: Izinga le-refractoriness yi-degree, okuyi-first class refractory material.Ukumelana nomlilo wamabhulokhi awugqinsi angu-100mm kungafinyelela emaminithini angu-225, futhi ukumelana nomlilo kwamabhulokhi awugqinsi angu-200mm kungafinyelela kumaminithi angu-480.
Ukuminyana ngobuningi (g/cm3)
amandla acindezelayo (MPa)≥
Shisa kabusha izinguquko zomugqa
Izinga lokushisa elimaphakathi le-thermal conductivity 350±25℃(w/k·m)
0.1MPa Izinga lokushisa lokuqala lokuthambisa ngaphansi komthwalo (℃)≥
Izinga lokushisa eliphezulu lesevisi (℃)
4.Yomisa izitini endaweni yokomisa.
5. Faka izitini kuhhavini lomhubhe ukuze zishiswe ngezinga lokushisa eliphakeme ukusuka ku-1300-1800 deg.
Okwedlule: Ibhodi le-Microporous
Olandelayo: Isitini se-graphite
Isitini esikhethekile se-Alumina
I-Magnesia Chrome Brick